Tirada Rayidka ku Dhimatay Duqaymaha Maryakanka Ee Somaliya Oo la Shaaciyay. – Awdalmedia
Tirada Rayidka ku Dhimatay Duqaymaha Maryakanka Ee Somaliya Oo la Shaaciyay.
Sagaal Bil oo ka tirsan Sanadkaan dhamaadka ah ee 2019 ayaa tiro ahaan ka badan duqeymaha Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya sanadkii 2018 sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hey’adda Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International.
Duqeymaha Mareykanka uu ka fulinayo Soomaaliya ayaa cirka isku shareeray tan iyo sanadkii 2016 markaas oo Soomaaliya laga fuliyey 14 Duqeyn, halka sanadkii 2018 ay gaartay tirada duqeymaha illaa 47 howlgal oo dhanka cirka ah.
Hey’adda Xuquuqul Insaanka ee Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 5 Duqeyn oo ka dhacday Gobolka Shabeelada Hoose Bishii April ee 2017 lagu dilay 14 qof oo Shacab ah.
Sidoo kale Hey’adda ayaa sheegtay in Duqeymahaas lagu dhaawacay in ka badan 8 qof oo Shacab ah.
Hey’adda ayaa duqeymahaas sheegtay inay mas’uul ka aheyd Mareykanka inkastoo Taliska Mareykanka ee Qaaradda Afirca ee loo yaqaan AFRICOM uu iska fogeeyey in duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya lagu dilay dad Shacab ah.
Amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan xaqiiqo raadin ah lagu sameeyo saameynta ay dadka Shacabka ah ku yeelatay duqeymaha Mareykanka .
Mareykanka ayaa Soomaaliya ka fuliyey 120 duqeyn seddexdii sano ee ugu dambeysay, waxaana ka dhashay khasaaro soo gaaray dadka Shacabka ah.
Dowladda Soomaaliya ayaan wax mas’uuliyad ah iska saarin dhibaatada Dadka Shacabka ah kasoo gaarto duqeyaha Mareykanka.
Somaliland Oo Heshiis la Saxiixatay Itoobiya.
Gud.Kuxigeenka UCID Oo Xaqiijiyay Jiritaanka Jabhad Lagu Sheegay Bariga Boorama.